OLEE OTú IJI BELATA RAM? ESI KPOCHAPỤ EBULE - AZỊZA AJỤJỤ - 2019
Olee otú iji belata RAM? Esi kpochapụ ebule
Mgbe a na-eme ọtụtụ ihe omume na PC, RAM nwere ike ịkwụsị ike ọkụ ma kọmputa ga-amalite ịkụda. Iji gbochie nke a na-eme, a na-atụ aro ka ị kpochapụ RAM tupu ịmalite ngwa "nnukwu" (egwuregwu, ndị editọ vidio, ndịnaaja). Ọ dịkwa uru ime obere nhicha na ịmepụta ngwa iji gbanyụọ mmemme niile a na-eji ntakịrị ihe.
Site n'ụzọ, isiokwu a ga-adị mkpa karịsịa maka ndị na-arụ ọrụ na kọmputa na obere obere RAM (ọtụtụ mgbe karịa 1-2 GB). Na PC ndị ahụ, enweghi mmetụta nke RAM, dị ka ha na-ekwu, "site n'anya".
1. Otu esi belata RAM (Windows 7, 8)
Na Windows 7, otu ọrụ gosipụtara na echekwa na nchekwa RAM kọmputa (na mgbakwunye na ozi gbasara usoro mmemme, ụlọ akwụkwọ, usoro, wdg) ozi banyere usoro ọ bụla nke onye ọrụ nwere ike ịgba ọsọ (iji mee ngwa ngwa). A na - akpọ ọrụ a - Superfetch.
Ọ bụrụ na ebe nchekwa na kọmputa adịghị oke (ihe karịrị 2 GB), ọrụ a, karịa mgbe ọ naghị, anaghị eme ka ọrụ ahụ dị ngwa, ma mee ka ọ daa ngwa ngwa. Ya mere, na nke a, a na-atụ aro ka ị gbanyụọ ya.
Esi gbanyụọ Superfetch
1) Gaa na Ogwe Njikwa Windows wee gaa "Ngalaba na Nche" ngalaba.
2) Nke ọzọ, mepee ngalaba "nchịkwa" ma gaa na ndepụta nke ọrụ (lee ọgụgụ 1).
Fig. 1. Nchịkwa -> Ọrụ
3) Na ndepụta nke ọrụ anyị na-achọta onye ziri ezi (na nke a, Superfetch), mepee ya ma tinye ya na kọlụm "mmalite" - enwere ike, gbakwunyere ya ọzọ. Na-esote, chekwaa ntọala ma regharịa PC.
Fig. 2. kwụsị ọrụ zuru oke
Mgbe ịmalitegharịrị kọmputa ahụ, iji RAM eme ihe iji belata. N'adịghị, ọ na-enyere aka belata RAM site na 100-300 MB (ọ bụghị ọtụtụ, mana ntakịrị ntakịrị na 1-2 GB nke RAM).
2. Otu esi echefu RAM
Ọtụtụ ndị ọrụ amaghị ọbụna ihe omume ndị "na-eri" RAM kọmputa. Tupu ịmalite ngwa "nnukwu", iji belata ọnụ ọgụgụ nke frek, a na-atụ aro ka ị mechie ụfọdụ mmemme ndị na-adịghị mkpa n'oge ahụ.
Site n'ụzọ, ọtụtụ mmemme, ọbụlagodi na ị mechiri ha - nwere ike ịbanye na RAM nke PC!
Iji lee usoro niile na mmemme na RAM, a na-atụ aro ka ị mepee njikwa ọrụ (ị nwere ike iji ọrụ nyochaa usoro).
Iji mee nke a, pịa CTRL + SHIFT + ESC.
Ọzọ, ịkwesịrị imepe taabụ "Usoro" wee wepụ ihe omume site na mmemme ndị ahụ na-eburu ọtụtụ ebe nchekwa na nke ị na-adịghị mkpa (lee fig 3).
Fig. 3. Iwepu ọrụ
Site na ụzọ, ọtụtụ mgbe ọtụtụ usoro ncheta na-ejikwa usoro usoro "Explorer" (ọtụtụ ndị ọrụ na-adịghị mma amaliteghachi ya, ebe ọ bụ na ihe niile efunahụ na desktọọpụ na ị ga-amalitegharịa PC).
Ka ọ dịgodị, ịmalitegharia Explorer (Explorer) dị nnọọ mfe. Nke mbụ, wepụ ọrụ ahụ site na "onye nyocha" - n'ihi ya, ị ga-enwe ihuenyo ọhụụ na nyocha na onye njikwa ọrụ (lee figụ 4). Mgbe nke ahụ gasịrị, pịa "faịlụ / ọrụ ọhụrụ" na njikwa ọrụ ma dee iwu "onye nyocha" (lee ọgụgụ nke 5), pịa bọtịnụ Tinye.
A ga-amalitegharịa ihe nchọgharị!
Fig. 4. Mechie onye nduzi dị mfe!
Fig. 5. Gbaa onye nyocha / nyocha
3. Mmemme maka nhicha ngwa ngwa nke RAM
1) Gaa n'ihu Nlekọta Ọrụ
Nkọwa (nkọwa + njikọ iji budata):
Ọ bara ezigbo uru ọ bụghị naanị maka ihicha na ịmechapụ Windows, kamakwa maka nlekota RAM nke kọmputa gị. Mgbe ị wụnye ihe omume ahụ n'akụkụ aka nri n'elu, a ga-enwe obere windo (lee fig 6) nke ị nwere ike nyochaa ọrụ nhazi, RAM, netwọk. E nwekwara bọtịnụ maka nhicha ngwa ngwa nke RAM - nnọọ adaba!
Fig. 6. Aga n'ihu na nlekọta ụlọ
2) Mem Kwenata
Site na saịtị: http://www.henrypp.org/product/memreduct
Ezigbo uru nke ga-egosi obere akara ngosi na-esote elekere na tray ma gosipụta ihe ruru% nke ebe nchekwa ahụ. Ị nwere ike ihichapụ RAM na otu igodo - ime nke a, mepee windo ihe omume mmemme ma pịa bọtịnụ "Clear memory" (lee ọgụgụ nke 7).
Site n'ụzọ, usoro ihe omume ahụ dị ntakịrị (~ 300 Kb), ọ na-akwado Russian, n'efu, enwere nsụgharị na-adịghị mkpa ka a rụnye ya. N'ikpeazụ, ọ ka mma iche echiche siri ike!
Fig. 7. Na-ehichapụ ihe omimi mwepụ
Enwere m ya niile. Enwere m olileanya na omume ndị dị otú ahụ dị mfe ị na - eme ka PC gị rụọ ọrụ ngwa ngwa 🙂